Tourism kuGlasgow Declaration yeClimate Change Vatambi Vane Simba Vatsva vanopfuura UNWTO kana WTTC
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Sustainability News » Tourism kuGlasgow Declaration yeClimate Change Vatambi Vane Simba Vatsva vanopfuura UNWTO kana WTTC
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Investments • misangano • nhau • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Ipo mubatanidzwa mutsva weSpain neSaudi unotungamira kufamba nekushanya uchida chiito kwete kuziviswa, Glasgow Declaration on Climate Action yakasainwa svondo rino.
Vanopfuura mazana matatu vane chekuita nekushanya vakasaina chibvumirano cheGlasgow Declaration on Climate Action svondo rino, icho chinoziva kudiwa kwekukurumidzira kwehurongwa hwepasi rose hwekuita kwemamiriro ekunze mukushanya.
Nepo muchina weUNWTO wekuparadzira nhema waitarisira kushandura chiitiko ichi chekuchinja kwemamiriro ekunze kuti utsigire WTTC kuti itsigire Secretary-General wayo wehurongwa hwekusimbisa sarudzo patsva mwedzi uno, WTTC yakajekesa kuti yakanga isiri kutsigira chero munhu.
Nyika yekushanya zvisinei yakabatana kana tasvika pakushanduka kwemamiriro ekunze. Vamwe vanounza delcaration, vamwe vanotarisa pane zvakakomba chiito, asi Climate Change ndiyo yakatarisana mukutangwazve kutsva kweindasitiri yekufambisa neyekushanya ine uye mushure meCOVID-19.
Maererano neshoko rakagamuchirwa na eTurboNews kubva the World Travel and Tourism Council, WTTC, iyo Glasgow Declaration idanho rinotungamirwa nemubatanidzwa unosanganisira UNEP, Tourism Declares, Travel Foundation uye inotsigirwa neUNFCCC.
Haisi chete UNWTO inotungamirwa, maererano neichi WTTC chirevo.
WTTC ine hukama hwakasimba nemasangano mazhinji eUN anosanganisira ari pamusoro, uyezve, tine kuzvipira kwakasimba kuKuchinja Kwemamiriro ekunze uye Nhengo dzedu dzaida kuratidza hutungamiriri nekusimbisa chishuvo chechiziviso panguva yakakosha.
Nhengo zhinji dzeWTTC dzakaita seAccor, Iberostar, nevamwe vakasaina chiziviso ichi, uye nekudaro zvaive zvakakosha kuti WTTC iwedzere izwi rayo kutsigira chishuwo chakanangana net zero uye kuzvipira kutsigira Nhengo dzayo kugadzira Zvirongwa Zvekuita Kwemamiriro ekunze.
Nekudaro, tsigiro yeWTTC yakataurwa paGlasgow Convention yakanga isina hukama neUNWTO Secretart-General sarudzo kana chero maitiro ezvematongerwo enyika, sezvayakaturikirwa mune mamwe mazwi akaonekwa pasocial media posts padyo neUNWTO.
Zvinoenderana nezvinotumirwa pasocial media zvakaonekwa paUNWTO nzvimbo dzinotsigira, Glasgow Declaration yakagadzirwa kuburikidza nekubatana kweUNWTO, United Nations Environment Programme (UNEP), Shanyira Scotland, iyo Travel Foundation, uye Tourism Declare a Climate Emergency, mukati mehurongwa hwe. Imwe Planet Sustainable Tourism Programme yakazvipira kusimudzira kushandiswa kwakasimba uye maitiro ekugadzira.
The Tourism Indasitiri inoda kuve chikamu chemhinduro kune njodzi yekushanduka kwemamiriro ekunze, akadaro Gurukota rezvekushanya kweSaudi, achitaura pamubatanidzwa mutsva wekushanya wepasi rose unotungamirwa neSaudi Arabia neSpain kutanga kwesvondo rino muGlasgow.
UNWTO zvisinei yanga isiri chikamu cheiyi Saudi neSpain yakatungamira chirongwa chevane simba vane chekuita nehurumende. Chitsidzo pachirongwa ichocho, chaive chiito, kwete chete sarudzo.
Pamusoro peiyo ichangopedzwa Ramangwana mu Investment Musangano (FII) muSaudi Arabia, mhedzisiro yaive chibvumirano pa Saudi Arabia neSpain kujoinha mauto kugadzirisazve kushanya post-COVID kusanganisira kuburikidza neUNWTO.
Wakapotsa uye wakanganisa pfungwa yeGlasgow Declaration. Zvose ndezvekuita. MaDeclarants ari kuzvipira kuderedza kuburitswa kwekabhoni ne50% panosvika 2030 uye anofanirwa kugadzira hurongwa hwekuita mukati memwedzi gumi nemiviri yekusaina, vozotaura gore rega rega kufambira mberi kwavo.